Hogaamiyaha Chechnya oo cisbitaal la dhigay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Hogaamiyaha Chechnya oo cisbitaal la dhigay
Image captionRamzan Kadyrov, 43 jirka hogaamiya Chechnya
Hogaamiyaha Chechnya, Ramzan Kadyrov, ayaa cisbitaal la dhigay isagoo looga shakisan yahay inuu qaaday Fayraska Korona, sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka.
Waxaa Arbacadii loo duuliyay caasimadda Moscow, si looga daweeyo xanuun leh astaamaha hergabka oo kale, sida qof xog oggaal ah uu u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax.
Hogaamiyahan oo mar dagaal jabhadeyn ah kula jiray xukuumadda Moscow ayaa hadda saaxiib dhaw la ah madaxweyne Vladimir Putin.
Weriyaha BBC ee Moscow ayaa sheegay in dad badan ay u haystaan in Kadyrov uu yahay nin aad looga baqo.
Marar badan ayaa lagu dhaliilay fasiraaddiisa shareecada Islaamka ee uu gobolkaasi kusoo rogay, iyo tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyay.
Lama oga xaaladdiisa dhabta ah, inkastoo wararka hordhaca ah ay tilmaamayaan in dhakhtarkiisa uu kula taliyay in loo duuliyo caasimadda Ruushka si loogu daweeyo.
Akhmed Dudayev oo ah madaxa telefishinka Grozny, saaxiib dhawna la ah hogaamiyaha xanuunsan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Tass in Kadyrov “uu xaaladdiisa maareynayo, isla markaana uu qaadanayo dhammaan tallaabooyinka muhiimka ah,” waxa uu intaa raaciyay “Xarunta taliskiisa weli isaga ayay gacanta ugu jirtaa.”
Siyaasiyiinta Ruushka iyo Fayraska
Haddii la xaqiijiyo in Fayraska Korona uu ku dhacay Kadyrov, ayaa waxa uu kamid noqonayaa mas’uuliyiinta sare ee uu haleelay xanuunka.
Ra’iisal wasaare Mikhail Mishustin ayaa maalmo ka hor ku soo laabtay shaqada kadib markii uu cisbitaal u galay xanuunka Covid-19.
Xoghayaha warfaafinta ee madaxweynaha Dmitry Peskov, wasiirka hidaha Olga Lyubimova, kan dhismaha Vladimir Yakushev iyo kuxigeenkiisa Dmitry Volkov ayaa dhammaantood laga helay Fayraska.
Khamiistii shalay ahayd, Ruushka ayaa shaaciyay in 127 qof oo horleh ay cudurka u dhinteen, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigtay 3,099.
317,554 qof ayuu cudurka ku dhacay dalkaasi, waana waddanka labaad ee ugu kiisaska badan caalamka. Balse dadka dhaliila xukuumadda Moscow ayaa tilmaamaya in dhimashada ay aad uga badan tahay inta la shaaciyay.
Hogaamiyaha Chechnya oo cisbitaal la dhigay was last modified: May 22nd, 2020 by Admin
DHAGEYSO:-BARNAAMIJKA KULANKA WARSAN EE WARSAN RADIO IYO WARBAAHINRA, March